Qoraa U Dhalatay Ingiriiska Oo U Hiilisay Falastiin Oo Buugaagteeda Laga Diiday Israa'iil - Xogside-news Xogside
Home WARARKA CAALAMKA Qoraa u dhalatay Ingiriiska oo u hiilisay Falastiin oo buugaagteeda laga diiday...
Qoraa u dhalatay Ingiriiska oo u hiilisay Falastiin oo buugaagteeda laga diiday Israa’iil
Laba ka mid ah dukaamada buugaagta ee ugu waaweyn Israa’iil ayaa sheegay inay joojinayaan iibinta buugaagta ay qortay Sally Rooney oo ah qoraa Irish ah ka dib markii ay diiday in buugeeda cusub lagu turjumo luuqadda Israa’iili.
Qoraaga caanka ah ayaa sheegtay in ay taageerayso baaqyada lagu qaadacay siyaasadda Israa’iil ee ku wajahan Falastiiniyiinta.
Tallaabada ay qaadeen dukaamada buugaagta ayaa ka dambeysay kadib markii ay ka soo horjeesteen go’aanka Rooney.
Mawqifkeeda waxa uu dhaliyay mawjado ammaan iyo cambaarayn isugu jira, taas oo uu ka dhashay dagaal afka ah oo ka dhacay baraha bulshadu ay ku wada xiriirto.
Dukaamada buugaagta ee Steimatzky iyo Tzomet Sefarim ayaa sheegay in ay buugaagta ay qortay Rooney ka saari doonaan dhammaan laamahooda iyo baraha internetka. Shirkaduhu waxay leeyihiin in ka badan 200 oo xarumood oo ku yaalla daafaha Israa’iil.
Waa tallaabadii ugu horeeysay ee ay qaadaan xarumaha buugaagta Israa’iil tan iyo markii ay soo shaacbaxday bishii hore in Rooney ay gaashaanka u daruurtay dalab ah inay ogolaato xuquuqda tarjumida buuggeeda Beautiful World, Where Are You.
Waxaa buuggeeda la soo bandhigay bishii la soo dhaafay
Waxay sheegtay in iyada oo “aad ugu han weyn” in labadeedii book ee hore loo turjumay Cibraaniga, “waqtigan la joogo, waxaan doortay inaanan ka iibin xuquuqda tarjumaada buugeyga cusub, daabacaadda fadhigeedu yahay Israa’iil“.
Rooney waxa ay sheegtay in haddii ay taasi sameyso ay ka baxsan tahay midnimada dhaqdhaqaaqa qaadacaadda iyo cunaqabataynta Israa’iil, kaas oo ku baaqaya in gebi ahaanba la qaadaco Israa’iil.
Waxay sheegtay, “in marnaba aysan aqbalayn qandaraas cusub oo ay la gasho shirkad Israa’iili ah oo aan si cad uga fogayn midab-takoorka, taageertana xuquuqda ay Qaramada Midoobay u qoondaysay dadka reer Falastiin”.
Midab-takoorka waxa uu ahaa siyaasad ku salaysan kala soocid iyo takoorid ay dawladdii ay hogaaminayeen caddaanka laga tirada badnaa ku dhaqan gelisay madowgii ugu badnaa ee Koonfur Afrika intii u dhaxaysay 1948 ilaa 1991kii.
Israa’iil ayaa muddo dheer ku andaconeysay in dhaqdhaqaaqa BDS ay ka soo horjeedaan jiritaanka dalka sidoo kalana uu dhiirigeliyay Yuhuud nacaybka. Waxay si adag u diidadaa in si xeeladaysan loola barbardhigo midabtakoorka.
Go’aanka Rooney waxaa cambaareeyay wasiirka qurba-joogta Israa’iil Nachman Shai, isaga oo ku tilmaamay “in dhaqanka qaadacaada ee Israa’iil nacayb-ka uu waji cusub yeeshay”.
Ololaha Falastiiniyiinta ee qaadacaadda akadeemiyada iyo dhaqanka ee Israa’iil ayaa sheegtay in Falastiiniyiintu “si diiran u soo dhaweeyeen” tillaabada ay qaaday Rooney, halka kuwo kalena ay sheegeen in si khaldan loo soo bandhigay.
Rooney ayaa dhowr abaalmarin ku heshay buugaagta ay qortay, oo ay ku jiraan Abaalmarinta Qoraaga da’da yar ee Sunday Times ee 2017 iyo Abaalmarinta Buugga Costa ee 2018.
Previous article5 cunto oo kuu horseedi kara dhibaatooyin caafimaad oo badan !
Next articleTallaal boqolkiiba 90 yareynayo kansarka ku dhaca minka dumarka